TPLF uumataa Oromoo Baleesuuf Karorra adda qabatee jirti Kanaafu Ummataa keenya bararuu qabna:-
A. Baratoota University jijiran wagga waggan Baratoooni Tigree akka ijoolee Oromoo abaran erga goodhee bodaa ijolee Oromoo, Ajeesuu, Hidhuu, Mana Barumsati ari'uu, biyya akka baqatan goochuu hojii goodhatee jira;
B. Uummataa Ola hidhachisee Oromoo irrati dulchisuun Oromoo ficisisaa jira;
Yerroo Adda Adda bakka adda addati Somaloota hidhachjisee Uumataa Oromoo bah'aa fi Kibbaa yerroo heeduu ficisisee jira, Ciroo, Meiso, Moyalee, Muluqee, Faqii, Nannoo Jijigaati , Ummata Naannoo Anniyyaa irrati yaakii dalagamee yoomi ilee kan hirnfatamuuu miti;
Yeroo Heeduu Afaariin hidhachisee Uumataa Karayuu ficisisa ture, Afaan Yayii Karayuu utuu hin hafiin Yerro wari Afari ajeessan nami tokko ilee hin gafanee;
Ummataa Beneshangul Hidhachisuun Naannoo Oromoiyyati bobasee namoota 400 ajeesise 12,000 buqisisee jira kana malee irra dedebiyan dula wal fakataa Oromoo irrati gegesisa ture;
Amahari TPLFn hidhatee Oromoo Nannoo Wellega, Karayuu fi Waloo irrati dulla goocha jiru;
Waan Genet lafa Oromoo utuu ta'ee jiru Uumata Sidama Oromoo irrati kakasee Oromoo ficisisee jira;
Uumata Geda'oo hidhachisee Oromoo irrati bobasun Oromoo qe'ee isaa irra buqisisee jira:
Ummataa Dorzee Hidhachisan Oromoo irrati bobasan jiru;
Garii fi Borana, Borana fi Gujii, Gujii fi Garii wal irrati kasuun lubuu kumatama baleessan jiru;
Amoo Amahra Manzee hidhachisaa Karayyanuu irrati dulla gudda banuuf deema jiru.
Oromoo lafa irra buqiftee gurgurachuun lafa Oromoo summeesite fxtee jirti;
Oromoo jeequmsa, hidha fi ajeecha baqatee akka Galanan India fi, Medirteran keessati dhumuu, Ongee Sudan, Egypt fi Libya keessati dhumuu gootee jirti.
Wayyanee TPLF ilmaan Tigray yerroo isaan Oromoo baleessan teeny ilaaluu hin qabnuu:-
Dhaabilee Oromoo, Ummaatii Oromoo fi nami dhunfa dhimmaa kana siirti hubatan Oromoon akka wal tumsee Nannoo isaa, Qabeenya fi ummata isaa egatuu goochun dirqama keenya.
Ogummaa Lola kan qaban bakka rakkon Oromoo irrati ga’eeti argamuun lammi isaan bararuu qabuu;
Oromoon naannoo nannoo isaati wxal guurmesee Ogumma Leenji warana fudhachuu qaba;
Mandhee keenya Miseensoota isaa hunda Leenji Ogummaa waraan akka argatanfi haala mijeesuu qabana,
Dhabilee Oromoo hundi waaan isaan irra egamuu akka gumachan Kabajan wamicha goona;
Torban Kana Keessa amoo Waar Amhara Galga Gaday fi waari BADN wal gurmessan Oromoo Karayuu irrati duluuf jiruu, Oromoo bakka jirtuu Oromoo wal gurmeesi wal birra dhabadhuu kan jeedhuu iyyati ka’ee jira. Wayyanen Hango ishee dheerefachuu jeecha Lola lamii Oromoo irrati kara hunda bantee jirti. OPDOn amoo dhuummaati Oromoo gamachuun fudhachun ala degersa tokko ilee gootee hun beektu. Yonatan Dhibsaa Oromoo irrati dula goodhamee human dafee qaqaba Oromoo qabachuun guyya tokko keessa Oromoo wallega ba’aa lubu isaan hambisee of biyya baqatee seena isaa waan gariin galmeese jira, OPDOn ama garuu Somalee ji’aa 3 gutuu Oromoo yerro qaltuu teesee ilala jirti. Kun yaakaa OPDOn ittigafatamtudha.
Dulaa Oromoo baha Oromiyya Anna Qumbi Nannoo Anniyyaa irrati goodhamee fi Oromoo Karayyuu irrati agamamee jiruu tumsuuf Dhabilee Oromoo Mandhen Oromoo ogeesoon Lola Oromoo bakka hundati dirmachuun biyya keessati lamii Oromoo akka gargartan dhamsaa keenya dabarsina. Ogganon TPLF shaira uumani Oromoo ficisisaa jiran kanaafi guyya tokko dhummati lammi Tigray irra waan ga’uuf deemu, kan itti gafataman ta’uu isaa Presidantiin Genocide Watch raga bayee jira. Somalota, Afariin, Amhara, Beneshanguliin hidhachisee Oromoo kan ficisisa jiru TPLF Tigray ta’uu Beekun Oromoo tarkanfi fudhatuu dura Oganoota TPLF irrati egalee diina dhigga Oromoo dhangalasuu hunda kara irra maqasuu akka qabuu Uumanii Anniyya dhamatee jira.